Soo saaraha reer Poland ee FIBARO wuxuu bixiyaa xalal lagu dhiso guri caqli badan. Waxaad ka aqrisan kartaa aaladaha cusub sida dareemayaasha ama kontoroolayaasha nalalka, kululaynta ama indhoolayaasha. Qalabaynta deegaankaaga guriga uma baahna inuu noqdo mid murugsan!
Hoyga Yubii - Hordhaca xarunta cusub ee FIBARO iyo xarunta NICE
Fibaro, nice, Yubii, z-ruxrux
Guriga Yubii waa xarunta maamusha guriga FIBARO ee casriga ah iyo alaabada qeyb ka ah nidaamka deegaanka Yubii, tusaale ahaan aaladaha ka socda Nice, FIBARO, noocyada saddexaad, iyo sidoo kale elero - sumad Jarmal ah oo ku xiran Nice. Guriga Yubii waa kii ugu horreeyay ...
Ololaha xayeysiinta wadajirka ah ee Nice Polska iyo FIBARO
Shirkadda Nice Polska, oo u dabaaldegeysa sannad-guuradii 25-aad ee sannadkan, ayaa xiriir dhow la leh isboortiga, gaar ahaan xawaaraha, sannado badan. Iyadoo lala kaashanayo FIBARO, oo ku biirtay safka kooxda Nice ee 2018, waxay diyaariyeen ...
Xakameeyaha FIBARO Walli ayaa yimid
FIBARO Walli Controller waa badhanka Z-Wave intelligent caqli badan oo gidaar ku rakiban oo kicin kara muuqaallo ama xakameyn kara aaladaha kale ee Z-Wave adoo adeegsanaya ururada Waxaa ku shaqeeya batteriga ku jira ama kan tooska ah ee hadda socda. Qalabku wuxuu ku habboon yahay Walli dhowr-muraayadaha. Ugu weyn ...
FIBARO, dib u eegista
Dimmer 2 oo ka socda FIBARO - dib u eegista nalka iftiinka
14 Febraayo 2021
Waxa daabacay	Rumow
gaabiyo, Fibaro, gaabiyo
Xakamaynta laydhku waxay umuuqataa inay tahay dhibic iska cad rakibaadda guriga. Maaha wax fudud oo shidan ama ka baxsan, laakiin sidoo kale xakamaynta dhalaalka ama otomatiga aaladaha kale. FIBARO Dimmer 2 ayaa kaa caawin kara ...
Xarunta Guriga ee FIBARO 3 Lite
dhexe, Fibaro, hc3, HC3 Lite
Waxaan haynaa war aad ufiican oo kusaabsan FIBARO! Shirkadda ayaa ku dhawaaqday inay sii deyneyso albaab cusub - FIBARO Home Center 3 Lite, kaasoo noqon doona mid ka jaban kan HC3. Faa'iidada ugu weyn ee hadafku waxay noqon doontaa qiimaheeda, waxaa loo malaynayaa inay kaliya ...
FIBARO Sensor Sensor - Dib u eegis shidma qiiqa
24 Janaayo 2021
qiiqa dareeraha, Fibaro, qiiqa dareeraha
FIBARO Sensor Sensor waa shidma ay tahay in qofkasta oo ku xamaasadeeya Smart Home berrinka Z-Wave inuu lahaado. Laakiin maahan oo keliya maxaa yeelay waxaad sidoo kale u iibsan kartaa Ayeeyo. Sababta Fiiri 🙂